Sidee looga ciiday Magaalada Garowe ee xarunta Maamulka Puntland? -
HomeWararkaSidee looga ciiday Magaalada Garowe ee xarunta Maamulka Puntland?
Sidee looga ciiday Magaalada Garowe ee xarunta Maamulka Puntland?
“Marka ugu horaysan waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan ummaadda Muslimiinta ah ee adduunka, shacabka Soomaaliyeed, kuwa reer Puntland waxaan ugu hambalyaynayaa munaasibadda ciidul Adxa fadligeeda oo ah munaasibad ku weyn dadka muslimiinta ah, shalay carafaa la taagnaa, maantana muslimiintu waxay ku ciidaysaa Ciidul Adxa, waxaan Alle ka rajaynaynaa ummaadda muslimiinta ah meelkastay joogto iyo dhibaatada ka jirta dalalka muslim ka ah inuu ka dulqaado”.
“Waxaan sidoo kale ummaadda Soomaaliyeed u rajaynayaa cilmi fiican, nabadgelyo iyo deganaansho uu siiyo, dhibaatooyinka haystana uu ka dulqaado” Ayuu yiri Madaxweynaha Dowladda Puntland.
“Waxaan ummadda Islaam ka ah ugu hambalyaynayaa munaasibadda maalintani, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaa leeyahay farxad ku ciida, intaasi kadib waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ilaashataan nabadgelyadiina, Puntland cadaw badan bay leedahay gude iyo debedba, kuwo shayaadiin ah iyo kuwo kale oo xuduudaha inagaga soo duula labadaba inaan dalkeena ka difaacanaa waa waajib”.
“Puntland waxaa lagu dhisay isku duubni, wadatashi iyo dulqaad intaaba Puntland hadda waa looga baahan yahay, waxaa looga baahan yahay Samir, waxaa looga baahan yahay wadatashi, waxaa looga baahan yahay isu tanaasul, waxaynu maqlaynaa in beelaha qaarkood guuxyo iyo waxjiraan, waxaan u sheegayaa Puntland dulqaad bay u baahan tahay, isku duubni bay u baahan tahay, way kusoo caana maashay, Xukuumaddatan aan madaxda ka ahay waxay diyaar u tahay wixii wax qabada inay la fadhiisato oo qanciso, lakiin caado umalahaan jirin in beelo shirshiraan oo hadalo soo saaraan, waxana ku boorinayaa xukuumadda in arrintaasi laga hawlgalo” Ayuu yiri Madaxweynaha Dowladda.